Mooshin-kii ka dhanka ahaa Ra’iisal wasaare Cadi wali Sheekh oo la qeybiyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Mooshin-kii ka dhanka ahaa Ra’iisal wasaare Cadi wali Sheekh oo la qeybiyay
Mooshin-kii ka dhanka ahaa Ra’iisal wasaare Cadi wali Sheekh oo la qeybiyay
Waxaa saakay baarlamaanka Soomaaliya ay yeesheen kal fadhi lagu waday in loogu qeybiyo xubnaha baarlaamnka mooshin ka dhan ah Ra’iisal wasaare Cabdiwali Sheekh Mohamed iyo Xukuumadiisa.
Kal fadhiga baarlamaanka oo manta loo diiday saxaafadu in ay gudaha u galaan ayaa waxaa lagu soow aramayaa in la maareeyay qeybinta warqadaha mooshinka kaas oo ay saxiixeen tiro xubnaha baarlamaanka oo tiradooda lagfu sheegay 138, kaddibna waxaa lagu kala dareeray fadhigii iyada oo ay xildhibaanada mucaaradsan mooshinka ay jeex jeexin warqadihii.
Gudoomiye Jawaari ayaa lagu buuqay markii uu gudaha u soo galay howlka shirarka, waxaana muddo daqiiqado ah uu isku dayay inuu Xildhibaanada dejiyo, si uu kulanka u furo, hase ahaatee waa ay ka dhega adeegeen, iyagoo buuqooda sii watay.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale iyana si hal haleel ah isaga soo huleelay xarunta Golaha shacabka, waxaana wali muuqata in mooshinka uu socon la’yahay buuqa iyo fowdada Baarlamaankana uu halkiisa yahay.
Previous articleGuddoomiye Jawaari oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Mooshin berri loo balansan yahay
Next articleWasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Yemen (Sawirro)